व्यवारिसे वालकलाई परिवारको जिम्मा लगाइयो – Pahilo Page
व्यवारिसे वालकलाई परिवारको जिम्मा लगाइयो
दाङको तुलसीपुरमा व्यवारिसे भेटिएका तीन जना बालकलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको छ । गत सोमबार तुलसीपुर ५ को बसपार्कमा भेटिएका तीन जना बालकलाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सहित सरोकारवालाहरुको समन्वयमा परिवारको जिम्मा लगाइएको हो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर, नबजागरण महिला तथा बाल संरक्षण केन्द्र (न्यु सिपीसी) तुलसीपुर र सिविसको सहकार्यमा बालकलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको हो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १ भमके छोटेका ११ बर्षिय एक बालक, सोही ठाउँका ९ बर्षिय अर्का बालक र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने ११ बर्षिय अर्का एक गरी तीन जना बालकलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको हो ।
विभिन्न विद्यालयमा अध्ययन गर्ने ति बालक साथीको लहलहैमा लागेर तुलसीपुर आएको र यहाँ चोरीमा सम्लग्न भएको पाइएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा राखेको थियो । प्रहरीले बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थालाई खवर गरेपछि उनीहरुको परिवारको पहिचान गरेर परिवारको जिम्मा लगाइएको हो ।।
प्रकाशित मिति : बिहिवार, माघ २५, २०७४ समय : १७:०८:४२ 96 पटक पढिएको